लण्डनस्थित कार्ल मार्क्सको सालिक कस्ले र किन फुटायो ?
एजेन्सी/ लण्डनको हाइगेट सिमेट्री (समाधीस्थल)मा रहेको कार्ल मार्क्सको समाधिमा क्षति पु¥याइएको पाइएको छ । आक्रमणकारीले समाधिमा रहेको त्यस मार्वलको पाटीमा क्षति पुर्याएका छन्, जुन सन् १८८३ को मार्क्सको मूल समाधिमा लगाइएको थियो । त्यसलाई सन् १९५४ मा स्मारक स्मारकसहितको समाधि निर्माण गर्ने क्रममा जस्ताको तस्तै राखिएको थियो ।
डङभेलले थप भने, ‘ग्रेड–१ स्मारकमाथि कसैले यस्तो गर्छ ? यो राजनीतिक विरोधको भद्दा शैली हो ।’ बेलायतमा ग्रेड–१ को स्मारकहरु त्यहाँको सरकारी विभागले सूचिकृत गर्ने ऐतिहासिक महत्वका स्मारकहरुमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्मारकहरु हुन् । कार्ल मार्क्सको समाधिलाई सन् १९९९ मा स्मारकहरुको सर्वोच्च दर्जा दिइएको थियो ।
को हुन् कार्ल मार्क्स ?
साम्यवाद सिद्धान्तका प्रतिपादक कार्ल माक्र्सको जन्म सन् १८१८ मा हाल जर्मनीमा पर्ने ट्रियरमा भएको थियो । क्रान्तिकारी राजनीतिक अभियानको कारण तत्कालिन समयमा युरोपका निरकुंश सरकारहरुको आँखाका कसिंगर भएका थिए उनी । यही कारण मार्क्स एकपछि अर्को देश निर्वासन सर्दै अन्तत सन् १८४९ मा बेलायतको राजधानी पुगेका थिए ।
त्यहाँ उनका अनन्य मित्र तथा राजनीतिक सहयात्री फ्रेडरिक एंगेल्सको बुवाको व्यवसाय थियो, जसलाई एङ्गेल्स स्वयमले सञ्चालन गरिरहेका थिए । एङ्गेल्सको सहयोगमा मार्क्सले आफ्नो बाँकी जीवन लण्डनमै बिताए । यसमा बेलायतमा त्यो समय युरोपको बाँकी देशमा भन्दा उदार राजनीतिक अभ्यासले पनि सहयोग गरेको थियो ।
लण्डनमा माक्र्सको धेरैजसो समय लण्डन म्युजियमको विशाल पुस्तकालयमा पुस्तक पढेर र महत्वपूर्ण कृतिहरु लेखेर बित्यो । मार्क्सको मृत्यु पनि लण्डनमै सन् १८८३ भएको थियो । राताेपाटीबाट